laacib » Ousmane Dembele oo shaaca ka qaaday arin sir ah & mudada uu ku sugnaan doono Camp Nou oo la ogaaday
Ousmane Dembele oo shaaca ka qaaday arin sir ah & mudada uu ku sugnaan doono Camp Nou oo la ogaaday
Ernesto Valverde waxaa uu doortay kursiga keydka inuu kaga soo tago kulankii sabtida Ousmane Dembele, balse xiddigan ayaa go’aansaday wax ka badan hal sano inuu kooxd abaaqi kusii ahaado.
Barca waxaa ay sameysay taariikhda xiddiga ugu qaalisan ee horyaalka Ligue 1 in ay ka iibiso xiddigeeda hore ee Neymar, durba waxaa ay lasoo saxiixatay Dembele kaasoo mudooyinka horeba dhaawacyo ay soo wajaheen.
“meel uma socdo hal xilli ciyaareyd ka bada ayana joogi doona, waxaan Barcelona u saxiixay shan sano oo heshiis ah, waxaan halkaan ku sugnaan doonaa muddo dheer” ayuu u sheegay Mar uu wareysi siinayey Telefoot.
20-sano jirkan waxaa uu fursad u heystay inuu ku biiro laacibkii Real Madrid sidoo kale Chelsea ayaa la dhacsan wacdaraha uu ku dhigay tartanka champions league kulamadii ay is wajaheen.
“haatan kuma sugni xaaldeyda ugu wanaagsan, marba matka ka dambeysa waan soo kaban doonaa, waxaan u shaqeyn doonaa sida ugu wanaagsan una tawabaran doonaa, sababtoo ah daalkeyga ayaa badan” ayuu kusii daray Dembelle.